Imifuno - Wikipedia
Asetyenziswa ngemihla, imifuno yiyo nayiphi na inxalenye yesityalo ukuba ningagqitywa ngabantu njengoko ukutya njengenxalenye yesidlo okunencasa. Igama elithi "yemifuno" liphantse engenasizathu, kunye becala kuchaziwe ngesithethe okupheka nenkcubeko. Idla ngaphandle nokunye ukutya efunyenwe kwi izityalo ezifana iziqhamo, iinqoba, ezinokutya okuziinkozo, kodwa kuquka iimbewu ezifana idanyaze. Intsingiselo lokuqala yemifuno ilizwi, isasetyenziswa nangoku zebhayoloji, ukuba ukuchaza zonke iintlobo zezityalo, njengoko kwi ngokwemiqathango "ubukumkani yemifuno" kwaye "izityalo".
Ekuqaleni, imifuno yaqokelelwa endle ngokuzingela waza wangena nokulima kwiindawo ezininzi zehlabathi, mhlawumbi ngethuba elisusela kwi-10,000 BC ukuya 7000 BC, xa indlela entsha yezolimo yobomi kuphuhliswa. Ekuqaleni, izityalo owakhulayo ekuhlaleni ange sasilinywa, kodwa njengoko ixesha lihamba, urhwebo wazisa izityalo zamanye ukusuka kwenye ukongeza iintlobo zasekhaya. Kule mihla, imifuno uninzi bakhulile lonke ihlabathi asivumela kwemozulu, kwaye izityalo ukuze kulinywa kwiindawo ekhuselweyo kwiindawo ngaphantsi ezifanelekileyo. China ke ngoyena mvelisi kwemifuno, kunye kurhwebo lwehlabathi iimveliso zezolimo ivumela abathengi ukuba bathenge imifuno ezikhuliselwe kumazwe akude. Isikali imveliso yahluka ukusuka kumafama ashishinayo axhobisa iimfuno zentsapho zabo ezinqwenelekayo ngenxa yesonka, ukuze ezolimo kunye acreages ezininzi izityalo elinye-kwimveliso. Kuxhomekeka kuhlobo yemifuno ochaphazelekayo, evuna isivuno ilandelwa kwalungiswa, ukugcina, ukuqhuba nokwazisa.
Imifuno kungatyiwa nokuba ukrwada okanye uphekiwe kwaye badlala indima ebalulekileyo ukutya babantu, ukuba kakhulu asezantsi kukutyeba necarbohydrates, kodwa eziphakamileyo weevithamini, iiminerali kunye nefayibha. Oorhulumente abaninzi ukukhuthaza abemi babo ukuba awadubadube kakhulu iziqhamo kunye nemifuno, izabelo ezintlanu okanye ngaphezulu ngosuku rhoqo kunconyelwayo.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-13 Eyo Mnga 2020, kwi-07:23